ISO 18000-6B Self-adhesive Prevent Tear Off Label, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) Auto Windshield Adhesive Tag, ETC Adhesive Tag, ISO 18000-6B Anti Dismantle Label, ISO 18000-6B UHF Fragile Prevent Tearing Stickers, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) Auto Windshield Fragile Prevent Tearing Stickers, ETC Fragile Prevent Tearing Stickers, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ETC စတစ်ကာများ, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) အော်တိုကားရှေ့မှနျဆန့်ကျင်တည်ဆောက်မှုတံဆိပ်တပ်ရန်
18000-6B ကလှိုင်းနှုန်းသည် UHF ပျက်စီးလွယ်ကာကွယ်ဆေးဖွိုစတစ်ကာများ, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) အော်တိုကားရှေ့မှနျဆန့်ကျင်တည်ဆောက်မှုတံဆိပ်တပ်ရန်, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ETC စတစ်ကာများ
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် ISO 18000-6B Anti Dismantle Label, ISO 18000-6B Self-adhesive Prevent Tear Off Label, ISO 18000-6B UHF Fragile Prevent Tearing Stickers, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) Anti Dismantle Label, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) အော်တိုကားရှေ့မှနျဆန့်ကျင်တည်ဆောက်မှုတံဆိပ်တပ်ရန်, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) Auto Windshield Fragile Prevent Tearing Stickers, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ETC စတစ်ကာများ
tag ကိုလတ်: လေထုအလတ်စား / ဖန်ခွက်အလတ်
chip ထုတ်လုပ်သူ: NXP
chip: ဦးကုတ် HSL (SL3 ICS30)
mode ကို Read: passive Non-ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် IC ချစ်ပ်
chip စွမ်းရည်: 2ဋ(2048နည်းနည်း)
programming သံသရာ: 100,000 ကြိမ်
chip ဖွဲ့စည်းပုံမှာ: 64 ပိတ်ဆို့, 4bytes / ပိတ်ပင်တားဆီးမှု
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: ISO ကို 18000-6B
operating အကြိမ်ရေ: 915MHz နှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှု (ဥရောပစံ 868MHz ၏စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်)
Baud မှုနှုန်း: 40kbit / s အထိ
operating အကွာအဝေး:7မီတာ (Reader ကိုများနှင့်အင်တင်နာအရွယ်အစား၏တန်ခိုးတော်အတိုင်း)
ထူးခြားတဲ့နံပါတ်စဉ်: 8 bytes (ဥပမာ: တစ်ဦး HSL UID အရေအတွက်ကို hexadecimal E0 ဖြစ်ပါသည် 04 00 00 တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသော BF EE B2 05,
ကာကွယ်ပေးရေးရန်: က byte mode ကို
ဦးတည်ချက်ကိုဖတ်ပါ: polarization ကိုဦးတည်ချက်သုံးစက်ကိရိယာများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်နှင့်အညီ
ပစ္စည်း: အနုပညာစက္ကူ, PET + အယ်လ်စွဲအင်တင်နာ
အရွယ်: 85.6× 54mm, 39× 19mm, သို့မဟုတ်ထုံးစံ
ISO18000-6B Label isaUHF passive smart tag, ယင်းအီလက်ထရောနစ်တံဆိပ်၏ ISO18000-6B စံညီ, တံဆိပ်တစ်ခုတာဝေးပစ်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ဆန့်ကျင်တိုက်မှုယန္တရားရှိပါတယ်, အသိဉာဏ်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး (လမ်းတံတား), အီလက်ထရောနစ်သေဆုံးသူစုဆောင်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, ယာဉ်လိုင်စင်ပန်းကန်လုံခြုံရေးဖော်ထုတ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု, မော်တော်ယာဉ် Marshall အချိန်ဇယားဆွဲစီမံခန့်ခွဲမှု, လယ်ပြင်၌စီမံခန့်ခွဲမှု၏အသိဉာဏ်ယာဉ်ရပ်နားစာရေး, entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်မော်တော်ယာဉ်စစ်ဆေးရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ port ကို, စသည်တို့ကိုဆိပ်ကမ်းကိုကွန်တိန်နာစီမံခန့်ခွဲမှု.
The ISO18000-6B Label, 860 ~ 960MHz လှိုင်းနှုန်းသည် UHF တီးဝိုင်းထဲမှာ run နိုင်ပါတယ်, ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ် (100MHz bandwidth ကိုမှတက်, ဒေသတွင်းလှိုင်းနှုန်းသည် UHF tag ကိုအကြိမ်ရေရွေးချယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်ရန်အတွက်. ရွေးချယ်ဖို့ဒေသဆိုင်ရာလှိုင်းနှုန်းသည် UHF tags များအကြိမ်ရေအချက်များကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, ဒေသခံဆက်သွယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း 900MHz အကြိမ်ရေမှားယွင်း applications များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စေဖို့), ၎င်း၏စက်အကြိမ်ရေ-ဖွယ်ရှိနေသည်ရရှိနိုင်ပါနှင့်သက်ရောက်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းတီးဝိုင်းအစီအစဉ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူးကိုသုံးပါ, အရှင်အတူတူ tag ကိုခွင့်ပြုဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာဖတ်ရှုနိုင်သည်. Labels with anti-collision performance, can deployed inavariety of environments worldwide, ဖတ်ပြီးပြီ / လယ်ပြင် programmer များနှင့်ပိုမိုမြန်ဆန် tag ကိုဖတ်ပြီးသားရေး / မြန်နှုန်းရေးရန်, သိပ်သည်းစာဖတ်သူကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် run နိုင်ပါတယ်.
အကြီးစားသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်,ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်သတင်းအချက်အလက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားမှတ်တမ်းတင်ရန်, တုံ့ပြန်ချက်ကိုခြေရာခံရန်ကုန်ပစ္စည်းများ-related ဒေတာအတွက်အထူးအသုံးဝင်, မေးမြန်းချက်များနှင့် terminal ကိုသတင်းအချက်အလက်.
I am interested in your product 18000-6B UHF Fragile Prevent Tearing Stickers, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) အော်တိုကားရှေ့မှနျဆန့်ကျင်တည်ဆောက်မှုတံဆိပ်တပ်ရန်, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ETC စတစ်ကာများ
prev: RFID လုံခြုံရေးပျက်ပြယ်တံဆိပ်တပ်ရန်, RFID Anti-ငွေစက္ကူအတုပျက်ပြယ်စတစ်ကာများ
နောက်တစ်ခု: RFID လက်ဝတ်ရတနာစတစ်ကာများတံဆိပ်တပ်ရန်, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF လက်ဝတ်ရတနာစတစ်ကာများတံဆိပ်တပ်ရန်
NFC ကိုမခိုင်မြဲလုံခြုံရေးစတစ်ကာ, NFC ကိုပျက်စီးလွယ်ဆန့်ကျင်လက်ကမြင်းတစ်ခါသုံးတံဆိပ်တပ်ရန်
RFID ပရင့်ထုတ်ရန်အရေစိုခံဓာတုသက်သေပြချက်စတစ်ကာ, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ပရင့်ထုတ်ရန်အရေစိုခံဓာတုသက်သေပြချက်တံဆိပ်တပ်ရန်
မောင်းသူမဲ့ Supermarket RFID စတစ်ကာ, မောင်းသူမဲ့လက်လီ Store ကကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်တပ်ရန်
RFID Card ကို (129)
ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် (57)
EM ကဒ် / LF Card ကို (21)